Fantaro i Dámilọ́lá Adébọ́nọ̀jọ, hampiantrano ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang ny 8 -14 May · Global Voices teny Malagasy
Marobe ny olona mahay tsy mihambahamba saingy tsy mahay manoratra
Voadika ny 08 Mey 2019 3:03 GMT
Vakio amin'ny teny Català, English
Ny taona 2019, ho ampahany amin'ny fanentanana sosialy hankalazàna ny fahamaroan'ny teny ety anaty aterineto, hifandimbiasan'ireo Afrikàna mpikatroka sy mpisolovava ny hampiantrano ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang hizaran-dry zareo ny zavatra niainany miaraka amin'ny fanomezana aina vao sy fampahafantarana ireo teny Afrikàna. Ny mombamomba an'i Dámilọ́lá Adébọ́nọ̀jọ (@iyayoruba) no resahan'ny lahatsoratra fanolorana, sy izay kasainy horesahana manadritra ny herinandro hampiantranoany azy.
Rising Voices: Azafady, mba lazao anay ny mombamomba anao.
Dámilọ́lá Adébọ́nọ̀jọ (aka Ìyá Yorùbá) no anarako, manampahaizana manokana momba ny teny Yorùbá, Mpandàla Kolontsaina, ary mpikatroka mametraka tsindrimpeo ho an'ny teny.
Efa taona vitsivitsy izao, miasa miaraka aminà olontsotra sy fikambanana momba ny Fandikanteny aho, nanao soramandry ho anà sarimihetsika Yorùbá maro, nanao feo lafika sy nampianatra ny teny Yorùbá tao anaty sy ivelan'ny aterineto.
Izaho ihany koa no mpanorina ny Alámọ̀já Yorùbá, ilay tsy miankina mpanome tolotra amin'ny fiteny Yorùbá izay manome tolotra momba ny teny no sady mampianatra isanandro ny teny Yorùbá ety anaty fampahalalambaovao sosialy.
Ho avoaka amin'ny teny Yorùbá ato ho ato ilay tantara nosoratako voalohany nadika ho teny anglisy, “Out of His Mind“, iray amin'ireo tantara noforonina sy be mpividy indrindra an ‘i Bayo Adebowale.
RV: Amin'izao fotoana izao, inona no toerana misy ny teninao ao anaty sy ivelan'ny tambajotra?
Mbola ambany dia ambany ny fampiasàna ny teny Yorùbá, saingy samihafa amin'izay nisy azy taona vitsy lasa izay. Miaraka amin'ny fahatongavan'ireo maro mpanome lanja azy ety anaty aterineto, betsaka ny zavatra niova, efa manomboka manoratra sy manafangaro hafatra miafina amin'ny teny Anglisy sy Yorùbá ny olona mba hampitàny ny hafatra ety anaty tambajotran'ny fampahalalambaovao sosialy.
Etsy ankilany, tsy nisy fihatsaràny ny fampiasàna azy ivelan'ny tambajotra, indrindra ho an'ireo tanora izay ny tenindreny dia ny Yorùbá nefa tsy afaka akory hiteny Yorùbá tsy afangaro teny anglisy. Ratsiratsy ny fandehany. Ny sasany aza tsy tia akory ny hampifandraisana ny tenany amin'ilay fiteny..
Ny sasany tonga mihitsy hatrany amin'ny hoe fanitàrana ny anaran-dry zareo tamin'ny teny Yorùbá mba hahatonga azy ho “sarotakarina”. Ny ankamaroan'ireo andiana ray sy reny vaovao taty aoriana koa zara raha mampiasa ny tenindrenin-dry zareo mba hifaneraserany amin'ny zanany, dia vao mainka ireny ankizy ireny manomboka mihevitra ny teny Yorùbá ho tsy misy ilàna azy.
Raha atao bango tokana, tsy ataon'ireo ray sy reny izay hahatsapan'ny zanak'izy ireo hoe manandanja izy io.
Fomba fijery iray hafa koa ny an'ireo Yorùbá mpamokatra sarimihetsika, mahita isika Indiàna, Sinoa sns…miteny ny tenin-dry zareo any anatin'ny sarimihetsika vokariny, saingy ny mifanohitra amin'izany no mitranga ho an'ny sarimihetsika Yorùbá, Miafara amin'ny fiteny anglisy daholo izy rehetra any anaty sarimihetsika Yorùbá, tsy mandrisika ny fampiroboroboana ilay teny velively izany.
RV: Lohahevitra toa inona no kasainao hifantohana mandritra ny herinandro hitantananao ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang ?
Kasaiko ny hizara ny fanitsiana ireo teny Yorùbá sasantsasany diso fanoratra, ny fomba ataoko hampiroboroboana ny teny Yorùbá, ny fandaharampotoana ho an'ny lahatsoratro, hankasitrahana ireo maro hafa nahavita be ary mbola manao izany ho an'ny teny Yorùbá sy izay zavatra hafa rehetra mety ho tonga ao an-tsaiko.
RV: Inona no tena fandrisihana lehibe ho an'ny fikatrohana dizitaly ataonao ho an'ny teninao? Inona no fanantenana sy nofinofinao ho an'ny teninao?
Ho fanombohana azy, manana teny sy kolontsaina iray mahafinaritra ny Yorùbá, ary ny ampahany mamy indrindra amin'izy io dia izaho nianatra ilay teny sy kolontsaina tany amin'ny oniversite ka dia nanapaka hevitra aho ny hampihatra azy sy hitondra azy amin'ny sehatry ny dizitaly. Raha nianatra Lalàna na Fitsaboana ianao, dia azo antoka fa ho lasa mpisolovava na dokotera mpitsabo, araka izany dia nanapaka hevitra aho fa ho Manampahaizana momba ny teny Yorùbá amin'ny fotoanako manontolo. Tsy misy taranjam-pianarana, na iray aza, azo hamaivanina.
Zavara iray hafa nanosika ahy ny zavamisy hoe marobe ny olona no afaka miteny tsy mihambahamba ny Yorùbá no tsy mahay manoratra tsara ny zavatra lazainy, Nanapaka hevitra aho ny hirotsaka mba hanitsy ny hadisoan-dry zareo.